Nepali Christian Bible Study Resources - तपाईं नि?
» अध्ययन मालाहरू » बाह्र चेलाहरू » १३-तपाईं नि?
तपाईं नि? के तपाईं पनि हामीले अध्ययन गरेका यी मानिसहरू जस्तै बन्नु सम्भव छ? के तपाईं प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला बन्नु सम्भव छ? आज पनि प्रभु येशूले पुरुष, महिला, युवा, युवती, बाल, बालिकालाई "मेरो पछि लाग" (हेर्नुहोस्, लूका ५:२७) भन्दै बोलाउनुहुन्छ। के त्यसो गर्नलाई तपाईंले निर्णय गर्नुभयो? ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको के हो?
प्रेरित ४:१३ पढ्नुहोस्। पत्रुस र यूहन्ना उनीहरूका शत्रुका सामु थिए। सुसमाचार प्रचार गरेका हुनाले उनीहरू पक्राउ परेका थिए (पद २-३)। उनीहरूलाई पक्रने यहूदी धर्मगुरूहरू पत्रुस र यूहन्ना "अनपढ र ____________ मानिसहरू" (प्रेरित ४:१३) हुन् भनी जान्दथे। यसको मतलब पत्रुस र यूहन्ना सामान्य, साधारण मानिसहरू थिए। उनीहरूले त्यसबेलाका नामुद प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा शिक्षा हासिल गरेका थिएनन्, तर उनीहरूका शत्रुहरू समेतले पत्रुस र यूहन्नासित एउटा अति विशेष गुण भएको महसुस गरेका थिए। "उनीहरूचाहिँ _________का साथमा रहेका छन् भनी तिनीहरूले उनीहरूलाई चिने" (प्रेरित ४:१३)! यदि दुईजना सामान्य मान्छे (पत्रुस र यूहन्ना) लाई लिएर येशूसित साथमा राखेको खण्डमा तिनीहरू दुईजना ज्यादै असामान्य व्यक्तिहरू बन्न पुग्दा रहेछन्!
१ कोरिन्थी १:२६ पढ्नुहोस्। परमेश्वरले धेरैजना ____________ वा धेरैजना ___________ वा धेरैजना ____________ बोलाउनुहुन्न। उहाँले ज्यादै साधारण मानिसहरूलाई नै बोलाउनुहुन्छ: "तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नाका निम्ति संसारका ________ कुराहरू [पत्रुस, यूहन्ना र मत्ती जस्ताहरू] लाई ____________ छ; अनि _____________ कुराहरूलाई शर्ममा पार्नाका निम्ति परमेश्वरले संसारका _____________ कुराहरूलाई चुन्नुभएको छ (१ कोरिन्थी १:२७)। मान्छेको बुद्धि र शक्तिले हुने होइन। परमेश्वरले मूर्ख र कमजोरहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई ज्यादै बुद्धिमान् र शक्तिशाली बनाउन सक्नुहुन्छ!तब, यसको श्रेय र महिमा कसलाई जान्छ (१ कोरिन्थी १:२८-३१)? ___________
"दाम अनुसारको माल हुन्छ" भन्ने भनाइ प्रायः साँचो हो। तपाईंले एउटा साइकल रू ५०० मा किन्नुभयो भने त्यो साइकल त्यति राम्रो खाले हुँदैन होला। पक्कै पनि त्यो नयाँ त हुँदैन नै! प्रभु येशूको चेला बन्नु भनेको खर्चिलो कुरा हो र यसको मूल्य ज्यादै ठूलो छ। र यसका लागि तिर्नु पर्ने मूल्य तिर्नु सार्थक छ।
यस अध्ययनमालामा हामीले अध्ययन गरेका ती १२ चेलाहरूलाई विचार गरौं। उनीहरू प्रत्येकले मूल्य तिरे। उनीहरूले आ-आफ्ना परिवारलाई छाडे, आफ्ना पेशालाई छाडे, आफ्ना सम्पत्तिलाई छाडे र उनीहरूले ख्रीष्टलाई पछ्याए। उनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नै ज्यानसमेत गुमाएर सहीदको मूल्य तिरे। जसरी पत्रुसले एकपटक भनेका थिए, "हेर्नुहोस्, हामीले __________ कुरा त्यागेका छौं र तपाईंको ________ ____________ छौं" (मर्कूस १०:२८)।
आज विश्वासी भएर जिउने बारेमा विचार गर्नुहोस्। के आज विश्वासयोग्य विश्वासी भएर जिउनलाई कुनै मूल्य चुकाउनुपर्छ? के त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू छन् जसलाई विश्वासीले "छाड्नुपर्छ" वा परित्याग गर्नुपर्छ? त्यस्तो परित्याग चाहिँ पाउने कुराको तुलनामा सार्थक छ त? एक विश्वासीले यस जीवनमा पाउने कुराहरू के के हुन्? यस जीवनमा विश्वासी हुनु किन सार्थक छ? यस जीवनमा विश्वासीसँग के हुन्छ जुनचाहिँ अविश्वासीसँग हुँदैन? आउनेवाला जीवनमा विश्वासी हुन किन सार्थक छ? आउनेवाला जीवनमा विश्वासीहरूसँग के हुनेछ जुनचाहिँ अविश्वासीहरूसँग हुनेछैन?
ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरूको बयान लेख्दा पावलले एकपटक एउटा अचम्मको कुरा लेखे: "_______ ___________ जस्ता, तर धेरैलाई ________ बनाउँछौं" (२ कोरिन्थी ६:१०)। यी मानिसहरू गरीब थिए, तर उनीहरूले धेरैलाई धनी बनाउन सक्थे। यो कसरी हुन सक्छ? एकजना गरीब मान्छेले कसरी अरूहरूलाई धनी बनाउन सक्छ? यी चेलाहरूसित के थियो अरूहरूलाई उनीहरूले बाँड्न सक्ने के थियो जुनचाहिँ पैसाले किन्न सक्ने कुनै पनि कुरा भन्दा ज्यादै मूल्यवान् थियो (रोमी ६:२३)? _______________________ __________________________________
२ कोरिन्थी ६:१० मा हामीले सिक्न सक्ने दोस्रो कुरालाई हेरौं। यहाँ चेलाहरूलाई यसरी बयान गरिएको छ: "_______ ________ जस्ता, तरै पनि हामीसँग _______ _______ छन्।" यो कसरी हुन सक्छ? केही नभएर पनि कसरी ऊसँग सब थोक हुन सक्छ? हात खालि भएर पनि त्यो कसरी भरिभराउ हुन सक्छ? यसको जवाफ सरल छ। भौतिक सम्पत्तिको सवालमा चेलाहरू धनी थिएनन्, तर उनीहरूलाई खाँचो पर्ने सबै कुरा उनीहरूसँग थियो।परमेश्वरले उनीहरूका हरेक खाँचोलाई पूरा गरिदिनुभयो (मत्ती ६:२८-३३ मा पढ्नुहोस्), तर आत्मिक सम्पत्तिको सवालमा उनीहरू आत्मिक खरबपतिहरू थिए! उनीहरूसँग "_______ आत्मिक आशिषहरू थिए" (एफेसी १:३)। विश्वासीहरूसँग भएका त्यस्ता कुराहरूमध्ये के के हुन् जुनचाहिँ मुक्ति नपाएकाहरूसँग हुँदैन र जसलाई पैसाले किन्नै सकिन्न? (यीमध्ये केही कुराहरूलाई एफेसी १ अध्यायमा सूचित गरिएको छ)।
एक साँचो चेलाले आफूसँग भएका सबै थोक र आफ्ना सारा सम्पत्तिलाई परित्याग गर्नुपर्छ, त्यसलाई बिदा दिनुपर्छ (लूका १४:३३)। बिदा दिनुपर्छ भन्नाले उसले आफ्नो सबै सम्पत्तिहरूलाई बाँडिदिनुपर्छ भनेको होइन, आफ्ना सबै पैसा र लुगा अरूलाई दिनुपर्छ भनेको होइन। तर यसको माने यो हो, विश्वासीले यसरी भन्न सक्नुपर्छ, "मेरो आफ्नो भन्ने कुनै सम्पत्ति छैन। मसँग भएका सबै नै प्रभु येशू ख्रीष्टकै हुन्। म आफू स्वयम् उहाँकै हुँ र मसँग जे जति छ, उहाँकै हो (१ कोरिन्थी ६:१९-२०); यसकारण, म आफूसँग भएका मेरा सम्पत्ति र पैसालाई म ज्यादै होशियारीपूर्वक प्रयोग गर्न चाहन्छु किनकि मसँग भएका सबै थोक बास्तवमा उहाँकै हुन्!" के तपाईं यो भन्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईंको सम्पत्तिमाथि उहाँको अधिकार छैन भने यसको पछाडि कारण के हुन सक्छ भने तपाईं स्वयम् उहाँको नभएको हुन सक्छ!
पत्रुस वा यूहन्ना वा पावलकहाँ आएर कसैले यसरी सोधे मानौं, "तपाईंको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को हुनुहुन्छ?" यी मानिसहरूले कस्तो जवाफ दिनेथिए होला? के उनीहरूले जवाफमा "मेरी पत्नी!" भन्ने थिए कि वा "मेरो भाई!" वा "मेरा बाबु"! वा "मेरी आमा!" वा "मेरो मित्र!" भन्ने थिए कि? अहँ, यीमध्ये प्रत्येकले नै एकै खालको जवाफ दिनेथिए: मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
संसारले सकली विश्वासीहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराको बयान गर्दा पावलले १ कोरिन्थी ४:१३ मा यसरी लेखे, "हामी यस संसारका ___________ र सबै कुराका फोहोर-मैलासरह भएका छौं।" उनको तात्पर्य यो थियो, "संसारले हामीलाई सबभन्दा खराब खाले मान्छेहरू ठान्छन्। तिनीहरूले हामीलाई मानव जातिकै कसर वा फोहोर-मैला ठान्छन्। मान्छेले फोहोर-मैलालाई फ्याँक्न चाहन्छन् किनकि त्यो फोहोर हुन्छ, कुनै कामको हुँदैन; संसारले पनि हामीलाई त्यसरी नै हेर्छ!"
प्रभु येशूको अनुसार साँचो चेला हुनलाई एक व्यक्ति उहाँको _________मा लागिरहनुपर्छ (यूहन्ना ८:३१)। "चेला" को माने हो "शिष्य, विद्यार्थी"। के तपाईं ख्रीष्टको शिष्य हुनुहुन्छ? के उहाँ तपाईंको शिक्षक हुनुहुन्छ? के बाइबल तपाईंको पाठ्य पुस्तक हो? के तपाईं आफ्नो बाइबल आफूसित बोकेर मण्डली सभामा जाने गर्नुहुन्छ? किन गर्नुहुन्छ? वा किन गर्नुहुन्न? हप्ताभरिमा के तपाईं आफ्नो बाइबल खोल्नुहुन्छ? कहिले? किन? पुस्तकहरूको पनि यो पुस्तक तपाईंको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण लाग्छ? गत हप्तामा प्रभुले तपाईंलाई कुनै कुरा सिकाउनुभएको थियो?
येशूले एक पटक यसरी भन्नुभयो, "हे प्रभु, हे प्रभु' भन्दछौ, र मैले भनेका कुराहरूचाहिँ पालन __________" (लूका ६:४६)। प्रभुलाई म पछ्याउँदैछु भन्ने तर प्रभुको आज्ञा नमान्ने व्यक्तिले केवल आफैंलाई धोका दिँदैछ। चेलाले प्रभुलाई आफ्नो प्रेम कसरी देखाउन सक्दछ (यूहन्ना १४:१५,२१,२३)? _____________ ______________________________________________
कोही ख्रीष्टको पछि लाग्न चाहन्छ र उहाँलाई पछ्याउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई ___________ गर्नुपर्छ (लूका ९:२३)। यसको तात्पर्य उसले आफैलाई "हुँदैन" भन्नुपर्छ, र उसले ख्रीष्टलाई "हुन्छ" भन्नुपर्छ। उसले "मैले चाहेको अनुसार होइन तर केवल मेरो मुक्तिदाताले चाहनुभएको अनुसार!" भन्नुपर्छ। पलास्टिकबाट निस्कनै नमान्ने, हात छिराउनै नदिने पञ्जालाई डाक्टरले प्रयोग गर्न सक्दैन। "डाक्टर, मलाई भर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं जे चाहनुहुन्छ म त्यही गर्नेछु" भन्ने पञ्जालाई मात्र डाक्टरले प्रयोग गर्न सक्छन्।
कहिल्यै मान्छे नचढेको जङ्गली घोडाले आफ्नै इच्छा मात्र गर्न खोज्छ। त्यसलाई काबुमा ल्याई, तालिम दिइनुपर्छ र मात्र त्यो मालिकको नियन्त्रणमा चल्न सक्छ। जङ्गली घोडा प्रयोगयोग्य हुँदैन; उसको मालिकसित मिलेर काम गर्ने उसको आदत छैन। त्यसलाई काबुमा ल्याइनैपर्छ, आफ्नो मालिकको इच्छामा सुम्पिने बनाइनुपर्छ र तब उसले आफ्नो मालिकसित मिलेर काम गर्न सक्ने आनन्द उसलाई हुन्छ। तब त्यस्तो सम्बन्धमा मिल्ने सबै किसिमका सुविधाहरू उक्त घोडाले पाउनेछ (दैनिक देखरेख, खाना, छाना आदि)। त्यस्तै गरी हामीले आफूलाई हाम्रा मालिक प्रभु येशू ख्रीष्टकहाँ सुम्पनुपर्छ र उहाँका लागि प्रयोगयोग्य हुनुपर्छ। विश्वासीको इच्छा तोडिनुपर्छ र उसले "म ता होइन, तर ख्रीष्ट" भन्न सक्नुपर्छ (गलाती २:२०)। यस्तो खाले सम्बन्ध प्रभुसित हुने क्रममा विश्वासीले परमेश्वरको प्रेम र वास्ताबाट हुने सबै आशिष र उपलब्धीहरूमा रमाउन सक्नेछ।
एकजनाले यसरी भनेका छन्, "म खास कोही पनि होइन, तर म जोकोहीलाई एकजनाको बारेमा बताउँछु जसले जोकोहीलाई पनि बचाउन सक्नुहुन्छ!
"बाह्र चेलाहरू" को अध्ययन यहीँ अन्त हुन्छ
« पावल प्रेरित
प्रेरितहरूका काम »